Maxaa kala socotaa Isbedelka dhanka Cimilada ah ee... | POHSOMEV.COM
Maxaa kala socotaa Isbedelka dhanka Cimilada ah ee...
posted by admin on Sun, 01/14/2018 - 10:14
Muqdisho (Caasimadda Online) - Shaki kama taagnaa inuu jiro isbedel dhanka cimilada oo wayn, iyadoo dadka ku nool Magaalada Muqdisho ay dareemayaan isbedelkaan ku yimid dhanka Cimilada Somaliya.
Isbedelka wayn ee dhanka Cimilada ee la dareemay ayaa ah habeenkii oo dadka reer Muqdisho ay dareemaan qabow badan oo qar qaryo wata, horay uma aysan arki jirin dadka reer Muqdisho qabowga noocaan oo kale ah.
Sidoo kale maalintii waxaa ka jira Magaalada dabeyl badan oo carada kicinaysa, waana mida keentay dhaqdhaqaaqa socodka dadka maalintii inuu gaabis noqdo, qof walibana uu ku ekaado goobtiisa, shaqada gurigiisa iyo meesha uu ku sugan yahay.
Qaybaha Bulshada oo isugu jira kuwa shaqaale ah iyo kuwa aanan shaqaale aheyn oo xarumaha shaqada milki u leeyihiin, ayaa dadka milkiyada leh goobaha shaqada waxa ay sheegayaan hurdada inay ku gaaraan illaa 9-ka Subaxdii iyaga oo ka kici waaya hurdada, sababo ku aadan qabowga subaxdii ka jira magaalada.
Shaki kama taagna qofka ku nool Muqdisho haddii aad tahay inaad dareentay qabow badan oo kugu kalifay inaad aroortii hore aad hurdada ka kici waydo ama aad qubeysan waydo, laakiin sababta ay tahay isbedelka dhanka Cimilada ee Muqdisho lagu arkay.
Marka laga hadlaayo dhulka Somalida Muqdisho waxa ay ka mid tahay Magaalooyinka ugu wanaagsan dhanka Cimilada ee aan qabow iyo kuleyl midna aheyn, maadaama cimiladadeeda dhexdhexaad ay tahay.
Deeganada Somalida waxaa aad ugu qabow dhulka ku xayndaaban Buuraha, sida Magaalooyinka Ceerigaabo, Sheekh, Wajaale, Boorama, Hargaysa iyo deegano kale oo intooda badan dhaca Waqooyiga dalka, dadkana ay la qabsadeen qabowga xoogan ee ka jira deeganadaasi.
Heerkulka Muqdisho ayaa maraya 23, markii hore wuxuu ahaan jiray 34 illaa 30 inta u dhaxeysa, balse hadda farqi wayn ayaa u dhaxeeya.- OnlineXafiiska Cadaado-@live.com